Hydroxypropyl Methyl cellulose HPMC Factory - China Hydroxypropyl Methyl cellulose HPMC Abavelisi, abaxhasi
1. I-MODCELL Hydroxypropyl Methyl Cellulose (HPMC), ayiyoni-ionic cellulose ethers eveliswe kwi-cellulose ephezulu yendalo (i-cotton ehlanjulweyo) kwi-cellulose ngokusebenzisa uluhlu lwempendulo yamakhemikhali. Inganyibilika emanzini kuwo nawuphi na umlinganiselo, ubuninzi bayo, uxinzelelo luxhomekeke kwi-viscosity yabo.
2. Banempawu zokunyibilika kwamanzi, ipropathi egcina amanzi, uhlobo olungeyo-ionic, ixabiso le-PH elizinzileyo, umsebenzi womhlaba, ukubuyela kwakhona ekusombululeni i-gelling kubushushu obahlukeneyo, ukuqina, ukwenza isamente ukwenza ifilimu, ukuthambisa ipropathi, ukumelana nokungunda kunye nokunye.
3. Ngazo zonke ezi mpawu, zisetyenziswa kakhulu kwinkqubo yokujiya, ukufaka ijeli, ukumisa uzinzo, kunye neemeko zokugcina amanzi.
1. HPMC grade ngemihla yohlobo non-ionic neselulosi kaEtere, nto leyo ikakhulu eyenziwe ifayibha yezityalo zendalo ngokusebenzisa uthotho processing chemical.White okanye olumhlophe imicu okanye ngumgubo granular, enyibilikayo emanzini kunye nezinye izinyibilikisi, ukusebenza hpmc kuyahluka eneenkcukacha ezahlukeneyo, i-HPMC ikwanakho nokuqina, ityuwa enganyangekiyo, uthuthu olusezantsi, uzinzo lwe-PH, ipropathi yokugcina amanzi, uzinzo olubonakalayo, ifilimu efanelekileyo yokwenza ipropathi, kunye nokumelana okubanzi kwe-enzyme, ukusasazeka kunye nokubambelela njl.
2. Iarhente yokuqina ekhethekileyo yebanga leekhemikhali lemihla ngemihla, iMODCELL 6508, umgubo omhlophe okanye omthubi, ongenabumba, ongenancasa kwaye ongenatyhefu.